Ukuphupha kweNombolo 6 Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa amanani edlala indima kumaphupha ethu, phantse ahlala enentsingiselo efuziselayo. Oku kusebenza ngakumbi kwinani 6. Ngenxa yokufana phakathi kwamagama "amathandathu" kunye "nokwabelana ngesondo," isimboli yephupha ihlala inikwa intsingiselo yesondo. Ivumela ukufikelela kwizigqibo malunga neminqweno engamanyala kunye nobudlelwane besini salo mntu kuthethwa ngaye.
Kwangelo xesha, inani lesithandathu linokuba nemvelaphi yesikolo, kuba uninzi lwabantwana baqala isikolo kwiminyaka emithandathu kunye nebanga lesi-6 banokunikwa apha njengawona mabakala mabi. Unako ukufumana inani le-6 kwimeko yephupha kunye neklasi yezibalo. Ukuba eli xabiso leemathematika libonakala njengophawu lwephupha, kufuneka lihlale lithathelwa ingqalelo ukuba oku kwenzeka phi. Kungangoko, umzekelo, ukuba sibona into amaxesha amathandathu, senze into amaxesha amathandathu, okanye ufumane isithandathu kuvavanyo.
Ukuphindaphindwa kathathu "666" kukwabaluleka ngokungaqhelekanga njengoko kuqondwa njengophawu lweBhayibhile loMchasi-Kristu.
Kodwa ezi zinto ziqwalaselwe njani ngokuthe ngqo kutoliko lwenqaku lephupha "inani 6"? Utolika njani ngokuchanekileyo?
1 Uphawu lwephupha «inombolo 6» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inombolo 6» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inombolo ye-6» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inombolo 6» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba inani lesithandathu okanye indibaniselwano no-sixes abaliqela livela ephupheni, oku ngokusisiseko kubonisa okukhoyo ngokoluvo ngokubanzi. Imvisiswano ebomini. Oku kubhekisa ngokukodwa kwindibaniselwano yesifundo sedatha. Phila ngokuvisisana nabantu besini esahlukileyo. Unolwazelelelo kwaye uthembekile kubudlelwane bakho. Ngokubuyisela, usondela, ukufudumala kunye nenkxaso.
Ngaphandle kombutho, inani u-6 libonisa oko iyunithi komzimba, ingqondo nomphefumlo.
Nangona kunjalo, ukuba iphupha lihamba neemvakalelo ezingalunganga, oku kuvumela izigqibo ezichaseneyo: kule meko kukho izinto kusafuneka zisetyenzwe. Imeko ethile inokuba yiyo Iingxabano y imbambano ibangela.
Inombolo yesi-6 yephupha icebisa ukuba umntu ekuthethwa ngaye ngamanye amaxesha ucinga kakhulu ngokugqibeleleyo. Amabango aphezulu ozibekela wona malunga nokuziphatha kwakho abekwa nakwabanye. Kodwa ayizizo zonke el mundo unokuthobela ngokupheleleyo. Ukuba uqaphela iminwe emithandathu endaweni yesihlanu kwisandla sephupha, umntu oleleyo uhlala ebonisa uvelwano olukhulu xa esebenzisana nomnye umntu.
Kwimeko yonxibelelwano lwesikolo esele luchaziwe nenombolo 6, inokusetyenziswa njengophawu lwephupha kwi-arithmetic yephupha. Uphuhliso olungaphezulu kunye nomnqweno wokufunda. Umntu ekuthethwa ngaye angathanda ukuzazi yena nobomi bakhe ngcono, mhlawumbi atshintshe nezinye iindawo.
Ukuba ubona ibanga lesithandathu ngezantsi koviwo, sebenza okanye uvavanye ephupheni, isenokuba semva kophawu Uloyiko lokusilela kunye nokungazithembi. Umnqweno wokuphuhlisa uqhubekeka ukhona nokuba kunjalo, kodwa kwisinyathelo sokuqala, okokuqala kuyafuneka ukuba ungene kwimvisiswano nesiqu sakho. Ukuphupha kusenakho ukukhula okungaphakathi.
Uphawu lwephupha «inombolo 6» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, inani le-6 ephupheni liphantse lafana Isimboli sesondo itolikwe. Isithandathu kukudityaniswa kobufazi kunye nobudoda. Inani limele imveliso yamaqela omabini kwaye kule meko ayinakubonisa iminqweno yesini kunye neendlela ezintsha zokufezekisa.
Ngokoluvo lwee-psychoanalysts, inani lesithandathu ngokufuthi libhekisa ku (ungazi nto?) Umnqweno wokuba nabantwana. Oku kusebenza ngokulinganayo kumaphupha amabhinqa kunye namadoda.
Ukongeza koku kutolikwa kwengqondo ngokubanzi, inombolo yesi-6 ephupheni ngamanye amaxesha inokubhekisa ngokwakho. Iindawo zobuntu Yenza ireferensi kwi. Kule meko, ibonisa indlela umntu avakalelwa ngayo ngamalungu obufazi kunye nabesilisa kunye nendlela abadibanisa ngayo kubomi bakhe bemihla ngemihla.
Ngokwengqondo, inani le-6 ephupheni likwabonisa ukuba umntu ukulungele ukuvusa ubomi ukuba ajolise kokutsha. ubudlelwane bothando vumela.
Uphawu lwephupha «inombolo ye-6» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya, inani lesithandathu ngokomfuziselo limele inye. ulungelelwano ngokweemvakalelo nemvisiswano yokomoya.